Ebe gburugburu ụwa na-eme emume Patrickbọchị St. Patrick | Akụkọ Njem
El Saintbọchị Saint Patrick a na-eme emume ya gburugburu ụwa na Machị 17th. Ọ bụ ụkpụrụ nke Ireland, mana ọ bụ eziokwu na enwere ndị Irish gburugburu ụwa, na a na-eme oriri dị ka nke a, jupụtara na akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ na biya, n'ọtụtụ mba. Kaosinadị, mbido emume a bụ nke okpukpe, iji cheta ọnwụ Saint Patrick, onye nwụrụ na 461.
Saint Patrick bụ onye ozi ala ọzọ, e lere anya dị ka onye ọsụ ụzọ wetara Iso Christianityzọ Kraịst na Ireland. N'ime oge ọ ghọrọ onye nlekọta nke Ireland, na 17 Maachị bụbu ezumike nke a na-eme na agwaetiti ahụ dum, ọkachasị na isi obodo, Dublin, nke nwere ọtụtụ ụbọchị nke ememme ma na-anabata ọtụtụ ndị ọbịa na-achọ ọchị na ụbọchị ndị a raara nye Saint Patrick.
2 Kilkenny, Ireland
3 Limerick, Ireland
6 Chicago, United States
7 Munich, Jamanị
8 Saint Patrick na Spain
Ememe St Patrick abụrụla ụlọ ọrụ na Ireland, na n'isi obodo ya, Dublin, a na-eme ya dịka ebe ọ bụla. Ruo ụbọchị, n'okporo ámá na ndị mmadụ na-eji ejiji na emerald green typical nke Saint Patrick, ya na okpu nkpari ndi nzuzu nke gwakoro otutu mmadu n’ihi na onye obula n’ejiri ha. Otu n'ime ebe kachasị ekwo ekwo ga-abụ Ogwe ,lọ Nsọ, ebe a na-eme mmanya na-ewu ewu n'okporo ụzọ, ọ bụ ezie na anyị ji n'aka na anyị ga-ahụ ọtụtụ ndị ọzọ gburugburu obodo ahụ. Na mgbakwunye na ịnụ ụtọ Guinness, anyị nwere ike ịnụ ụtọ ngosipụta mara mma na mmemme na ntụrụndụ n'okporo ámá.
Ọ bụrụ n’ị hụrụ ụdị egwu dị iche iche n’anya, ma ọ kachasị ọkachasị ọdịnala ma ọ bụ Irish, ebe ị ga-eme emume Saint Patrick bụ Kilkenny. N'ime obodo Irish a, ha na ọtụtụ ndị na-eme ụbọchị ncheta ha egwu egwu. Live concerts, music na pubs na noo iji mụtakwuo banyere ọdịnala nke Irish music, niile saa, n'ezie, na-a Irishụ biya Irish na whiskey na ya pubs.
Ọ bụrụ n’ịchọrọ itinye nzọ, ị nwere ụzọ dị iche iji wee mee emume Saint Patrick n’obodo ọzọ dị na Ireland, pụọ na mkpọtụ na mkpọtụ nke isi obodo ahụ. Na Limerick ha raara onwe ha nye agbụrụ ịnyịnya ịnụ ụtọ ezumike mba a. N’agbata Satọdee na Sọnde, a na-agba agbụrụ asaa kwa ụbọchị. O doro anya na ụzọ ọzọ dị mma iji mee emume Saint Patrick.
Na mpụga Ireland, anyị maara na ebe ha ji ememe a kpọrọ ihe ọtụtụ afọ bụ na United States, ebe enwere ọtụtụ Ndị kwagara Irish. Na New York ha na-eme ememme dị iche iche iji mee ememme taa, ha nwekwara ọdịnala na-atọ ọchị ma na-achọ ịmata ihe anyị ga-elebara anya ka anyị wee ghara ị nweta ụjọ. Ndị na-eyighị uwe na-acha akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ, ga-enweta nchikota n'aka onye ọ bụla, ya mere ọ bụ ụbọchị dị mma iwepụta uwe ndị ahụ na-acha akwụkwọ ndụ anyị nwere n'ime kaboodu.
Agbanyeghị na pati ahụ na njegharị ya na mba ụwa niile taa bụ New York, na United States ekwuru ya mbụ emee ya Ha sitere na Boston, ya mere, ọ bụkwa ebe dị mma ịnụ ụtọ ụbọchị Saint Patrick. Obodo nke na-ewere ememe a dika ezigbo omenala nke ha ji amata ya, na-ewere akpa na ụdị ejiji ndị Irish n'okporo ámá maka otu ụbọchị. Nlegharị, nnọkọ oriri na ọ barsụ andụ ebe ị drinkingụ biya bụ ihe kachasịkarị ụbọchị ahụ.
Chicago enweghị nnukwu parades, mana ọ na-eme ihe iji hụ. Kwa afọ na St.bọchị St. Patrick, na-eji mmiri emerald agba mmiri, na nsọpụrụ nke onye nsọ. O doro anya na ọ bụ ihe dị iche iche ma na-atọ ọchị.
Agbanyeghị na Oktoberfest a ma ama karịa na Munich, nke bụ eziokwu bụ na ndị German anaghị echefu ohere ịme ememme otu mmanya na-aghọ protagonist. Yabụ n'obodo a m makwaara ha na-eme ihe ngosi na pipers na Guinness na Ogwe.
Saint Patrick na Spain
Na obodo anyi enweghi omenaala nke Saint Patrick, ma o bu ya mere na obu emume a na-adighi eme ebe obula, ma anyi ghari ikwu okwu ezumike. Agbanyeghị, enwere ọtụtụ ụlọ mmanya na ụlọ mmanya na ngwụsị izu nke dabara na ezumike ahụ enwere ụdị okpu niile dị iche iche na ị nwere ike detuo Guinness. N'obodo ukwu, enwere obi abụọ na ebe dị iche iche iji mee ememme a, ebe enwere akwa na oghere ndị na-acha akwụkwọ ndụ. Ọ bụ ezie na ọ bụghị ọdịnala agbasoro, ọ na-aghọ ọgbakọ ọzọ anyị na-ewe site na mba ndị ọzọ iji nwekwuo oge ịme oriri.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ Njem » General » Ebe gburugburu ụwa usọrọ St. Patrick St.bọchị